रूस जनताहरु 'दोस्ती विश्वविद्यालय (PFUR) सोभियत युग देखि यसको परम्परा र शिक्षा कर्मचारी लागि ज्ञात छ। विश्वविद्यालय विदेशी अमेरिका 450 nationalities प्रतिनिधिको लाग्न सक्छ किनभने यो संस्थाले को मुख्य विशेषता विद्यार्थीहरूको एक विविध राष्ट्रिय आकस्मिक छ। विशेष मा मांग मा रूसी जनताहरु 'दोस्ती विश्वविद्यालय मास्टर्स। यहाँ लगभग सबै दुनिया भर देखि विद्यार्थी भर्ना गर्छन, त्यसैले यो विश्वविद्यालय थियो र मालिकका डिग्री गर्न भर्ना को सुविधाहरू यस लेखमा छलफल गरिनेछ।
PFUR एक बिट
लगभग ठूलो स्नेह यो संस्थाले सबै स्नातकहरूको यसको भित्ताहरू भित्र खर्च वर्ष बिर्सनुहुन्न। आखिर, यो अचम्मको छ - संसारभरि 150 भन्दा बढी देशका विद्यार्थी संग अध्ययन गर्न! तर यो nuance - छैन मात्र प्लस विश्वविद्यालय हो।
तपाईं मालिकको मा जनता मैत्री विश्वविद्यालय, पहिलो सूचना उच्च गुणस्तरीय उपकरण स्थानीय प्रयोगशालाहरुमा स्थापित छ कसरी गराइन्छ भने। तिनीहरूले, 46 भन्दा हाल धेरै छन् सुसज्जित यी अनुसन्धान प्रणाली प्रत्येक। हाल रिपोर्ट अनुसार, आफ्नो विश्वविद्यालय मा 260 निर्माण।
विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन समयमा तिनीहरूले पूर्णतया अन्तर्राष्ट्रिय स्तर संग मिल्ने एउटा शिक्षा प्राप्त खुसी छन्। एक डिप्लोमा स्नातक विदेश कुनै पनि विदेशी कम्पनी वा हाम्रो देशमा तिनीहरूलाई लागि ढोका खोल्छ जो युरोपेली मानक, पूरक हुनेछ।
आवेदकहरुलाई 36 भन्दा बढी गन्तव्यहरू र 200 पूरक शिक्षा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न Rudny मास्टर्स। क्षणमा, रूसी जनताहरु 'दोस्ती विश्वविद्यालय को छत अन्तर्गत 14 संस्थाहरू, जो सबैभन्दा विशिष्ट चिकित्सा छन्। आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ जो यो कहीं फेला पार्न कठिन हुनेछ यस्तो ज्ञान आधार, हो भन्छन्। मानिसहरूलाई मित्रताको विश्वविद्यालय स्नातक अत्यधिक रूस र विदेश मूल्यवान हुनुहुन्छ किनभने कठिन काम, भविष्यमा जागिरमा इनाम छ।
मानिसहरूलाई मित्रताको विश्वविद्यालय मा स्नातक संकाय नम्बर 37 रूसी र विदेशी विद्यार्थीहरूको उपलब्ध पुग्न आवेदकहरुलाई सजग हुनुपर्छ:
"विदेशी क्षेत्र अध्ययन"।
तपाईं मानवीय अभिमुखीकरण को विषयों गर्न gravitate भने, तपाईं निम्न संकाय बन्द गर्नेछ:
तर सही विज्ञान मा विशेषज्ञहरु निम्न तालिका अनुसार लागू गर्नुपर्छ:
प्रत्येक संकाय जनता मैत्री विश्वविद्यालय (एमए) धेरै specializations छ, त्यसैले त सजिलो हुने छैन ब्याज निर्देशन चयन गर्नुहोस्। यो दोभासे प्रशिक्षण को विशेष गरी साँचो हो, कहिलेकाहीं विद्यार्थीहरू नै समय दुई वा बढी विशेषज्ञता, एकदम श्रम बजार मा मांग बढ्छ जो मा प्राप्त।
मानिसहरूले 'दोस्ती विश्वविद्यालय, मास्टर गरेको: प्रविष्टि
तपाईं संस्थाले एक विद्यार्थी बन्न योजना भने, तपाईं रूसी विश्वविद्यालय जनताहरु 'मित्रताको प्रवेश सबै nuances बारेमा जानकारी आवश्यक हुनेछ। हामी विस्तृत रूपमा सकेसम्म धेरै तिनीहरूलाई बताउन प्रयास गर्नुहोस्।
पूर्ण-समय र भाग-समय: हामी सामान्य मामलामा विषय को रसिद विचार भने, यो प्रशिक्षण दुई पक्षबाट बाहिर छ जोड गर्न आवश्यक छ। विद्यार्थी पनि बजेट ठाउँहरू प्राप्त गर्न अवसर, तर असफलता को मामला मा उनि भुक्तानी प्रशिक्षण लागि उपलब्ध हुनेछ।
विदेशी र रूसी विद्यार्थी लागि प्रवेश परीक्षा केही मतभेद छ भनेर मनमा राख्न, तर ती सबै रूसी र सधैं विद्यार्थीको व्यक्तिगत उपस्थिति हुनुहुन्छ। ई-मेल मार्फत टाढाको परीक्षण र परीक्षा अनुमति छैन।
निम्न खण्डहरू मा, हामी अझ बढी ध्यान यी विषयहरू भुक्तानी गर्नेछ।
आवेदकहरुलाई लागि प्रवेश परीक्षा
जो संस्थाले आधिकारिक वेबसाइटमा पाउन सकिन्छ योजना, अनुसार, लेट जुलाई मा शुरू सबै नागरिकहरु लागि RUDN magistracy गर्न प्रवेश परीक्षा। सबै परीक्षाहरू लेखिएको हो र मुख्य रूप पूर्ण-समय वा अध्ययन भाग-समय मोड को विद्यार्थी को लागि अभिप्रेरित छन्। तीस - सबै परीक्षण अंक को न्यूनतम संख्या, interdisciplinary छन्। यो प्रशिक्षण दुवै प्रकारका लागू हुन्छ। जो एक बित्दै जाँदा ग्रेड प्राप्त छ आवेदक, तर यो पूर्ण-समय विद्यार्थीहरूलाई भर्ना दूरी सिक्ने लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ लागि पर्याप्त छैन। एउटा सानो प्रतियोगिता को मामला मा, त्यो बजेट स्थानमा प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता छ।
केही संकाय मेजर नै परीक्षा को वितरण आवश्यक हुन सक्छ भनेर मनमा राख्नुहोस्। त्यसैले, धेरै आवेदकहरुलाई भर्ना आफ्नो संभावना बढ्छ जो नै समय, मा धेरै संकाय र विषयों लागि आवेदन छन्।
मानिसहरूलाई मित्रताको विश्वविद्यालय (एमए) मा आवेदन अन्तिम म्याद प्रशिक्षण र वित्त को चुनिएको फारम फरक। 28 अगस्ट - तर स्वागत को शुरुवात हालको वर्ष को जुन 1 र अन्तिम दिन मानिन्छ छ।
भर्ना कागजातहरू को नियम
मा रूसी विश्वविद्यालय जनताहरु 'मित्रताको यस वर्ष देखि इलेक्ट्रोनिक फारम कागजातहरू पेस गर्न सक्नुहुन्छ। आवेदकहरुलाई अनुप्रयोग पूरा गर्नुपर्छ, शैक्षिक कागजात को स्क्यान गरिएको प्रतिहरू संलग्न र चयन समिति को आधिकारिक मेलबक्स तिनीहरूलाई पठाउन। यो निकै हाम्रो देश को रिमोट भागमा बस्ने विदेशी विद्यार्थी र रूस लागि प्रक्रिया सरल।
तपाईं व्यक्तिमा लागू भने, कृपया निम्न प्याकेज प्रदान:
मूल र पहिचान कार्ड को प्रतिलिपि;
शिक्षा को प्रमाणपत्र;
कुनै पनि चार फोटो 3x4 सेमी।
एकदम भिन्न भिन्न संरक्षित मा बेड को संख्या। उदाहरणका लागि, सामान्य प्रतियोगिता मा "नैनो र Microsystem प्रविधि" को संकाय मा जैव रासायनिक प्रौद्योगिकी र नैनो को संस्थान 12 सिट छुट्टाछुट्टै पूर्ण-समय को लागि विनियोजन - मात्र2विशेषता "अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध" सामान्य प्रतियोगिता मा 15 सिट विनियोजन, पूर्ण-समय शिक्षा - 60 , भाग-समय - 12 फलस्वरूप, विद्यार्थीहरूले धारा मा 87 सिट लिन मौका छ।
धेरै विद्यार्थी प्रश्न बारे धेरै चिन्तित छन्: "के RUDN बजेट मास्टर?"। वा बरु - बजेट स्थानहरू। साँच्चै, विद्यार्थी बीच यो केवल प्रशिक्षण लागि शुल्क आधारमा पुग्न सकिन्छ कि rumored छ। वास्तवमा यो जनताहरु 'दोस्ती विश्वविद्यालय रूस, साथै अन्य विश्वविद्यालयहरु, नि: शुल्क अध्ययन गर्न आवेदकहरुलाई सक्षम, छैन। र अंक पर्याप्त छैन मात्र, तपाईं एउटा सम्झौता आधारमा प्रशिक्षण को लागि एक आवेदन पेश गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
मानिसहरूले 'दोस्ती विश्वविद्यालय, शिक्षण शुल्क स्नातक
तपाईं विश्वविद्यालय शुल्क को अध्ययन गर्न योजना भने तपाईं ध्यान सम्झौता कार्यान्वयन सबै nuances जाँच्न आवश्यक छ। एक मालिक डिग्री जनता मैत्री विश्वविद्यालय शिक्षण शुल्क संकाय लागि मांग निर्भर हुनेछ भनेर मनमा राख्नुहोस्। सबै अन्तर्गत संस्थाले आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध दर संग विस्तार "भुक्तानी शिक्षा।" तर औसत मा, प्रशिक्षण को एक वर्ष 200 भन्दा कम हजार rubles खर्च गर्न सक्दैन।
तपाईं आमाको राजधानी को खर्च भुक्तानी गर्न योजना भने, यो अग्रिम लेखा विभाग सूचित गर्नुपर्छ। तपाईं सम्झौता एक विशेष नमूना तयार गरिनेछ। विद्यार्थीहरूको अर्को वर्ग कुनै पनि रूसी बैंकहरू मार्फत भुक्तानी गर्न सक्छ। तर तिनीहरूलाई केही आफ्नो सेवाहरूको लागि आयोग लिन भूल छैन।
सबै पूर्ण-समय विश्वविद्यालय मा विद्यार्थीहरूको र अनुपस्थिति RUDN मा एक मालिक डिग्री अध्ययन गर्न एकदम केहि आवेदकहरुलाई बुझ्न सजिलो तरिका गर्न एकदम पारदर्शी छ भने। वास्तवमा, दाखिला प्रक्रिया र प्रशिक्षण परीक्षा को पत्राचार फारम को मिति अरूबाट कुनै फरक छन्। तपाईं पनि विश्वविद्यालय आउन र सबै प्रवेश परीक्षण, भविष्यमा आफ्नो पर्खाल भ्रमणमा सत्र र ज्ञान को एक राम्रो आधार प्राप्त गर्न इच्छा निर्भर हुनेछ मात्र फ्रिक्वेन्सी मार्फत जान आवश्यक छ।
खैर, पत्राचार र साँझ कक्षाहरू द्वारा विद्यार्थीहरू काम र धेरै आवश्यक अनुभव हासिल गर्न को लागि एक मौका प्रदान गर्नुहोस्। भविष्यमा यो एक प्रतिष्ठित काम प्राप्त गर्न धेरै सजिलो हुनेछ। धेरै विद्यार्थी र रूसी विश्वविद्यालय जनताहरु को दोस्ती को को स्नातकहरूको दूरी शिक्षा को स्तर धेरै उच्च छ भन्ने उल्लेख गरे। व्याख्यान पछि नियमित भर्ना कि जस्तै शिक्षकहरू छन्। त्यसैले, साँझ वा सत्र समयमा विश्वविद्यालय उपस्थित गर्नेहरूलाई को ज्ञान, अक्सर विद्यार्थीहरूको अन्य विभाग भन्दा पनि बलियो छन्।
पत्राचार शुल्क द्वारा र budgetary आधारमा तपाईं सिक्न सक्छौं भनेर मनमा राख्नुहोस्। यो बित्दै जाँदा स्कोर मा निर्भर गर्दछ। सधैं सम्झौता भन्दा धेरै पटक हो पत्राचार पाठ्यक्रम मा बजेट विद्यार्थीहरूको संख्या।
Nonresident र विदेशी विद्यार्थीहरूको एक छात्रावास PFUR बस्न मौका छ। क्षणमा, खाली ठाउँहरू 8843. को कुल संख्या संग 13 हस्टल छन् तर, सबै comers यी ठाउँहरू पर्याप्त छैन। तसर्थ, विद्यार्थीहरूको सबैभन्दा स्ट्यान्डबाइ अवस्थामा छन्, र एक पोषित कोठा, विश्वविद्यालय मा भर्ना पछि पनि केही महिना कहिल्यै प्राप्त गर्न सक्छन्।
एक विद्यार्थीको वित्तीय क्षमता को आधार मा बाथरूम र शौचालय संग एक उत्कृष्ट कोठा अपार्टमेन्ट प्रकार मा गणना गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रति महिना लगभग47000 मा rubles हुनेछ तर भुक्तानी गर्न। तपाईं सस्ता कुरा रुचि हो भने, तपाईंले प्रत्येक तल्ला मा एक साझा भान्सा संग तीन वा चार मान्छे मा एक कोठा लागि अनुरोध गर्न सक्छ। हरेक फ्रिज स्थित छ, त्यसैले विद्यार्थीहरू 'उत्पादन भण्डारण संग समस्या उत्पन्न गर्दैन।
विद्यार्थी र स्नातक को समीक्षा
बारेमा मालिकको RUDN इन्टरनेटमा समीक्षाएँ धेरै भिन्न छन्। एक कल्पना, यो गाह्रो छ - सत्य हो ती जो, र त्यो निर्धारण गर्न। तर सामान्य मा, यस संस्थाले मा प्रशिक्षण को केही सुविधाहरू छन्।
तिनीहरूलाई यहाँ कम लागत प्रशिक्षण आकर्षित बारेमा धेरै विद्यार्थी बताउनुहोस्। पैसा को एक अपेक्षाकृत सानो रकम लागि तिनीहरूले धेरै लोकप्रिय संरक्षित मा सिक्न गर्न सक्षम छन्। र यो एक विशाल प्लस जनता मैत्री विश्वविद्यालय हो।
तर, शिक्षक विद्यार्थी परीक्षा मा धोखा वा तिनीहरूको वितरण भुक्तानी गर्न भन्ने तथ्यलाई गर्न एकदम वफादार छन्। यो प्रणाली धेरै साधारण छ, त्यसैले केही स्नातकहरूको ज्ञान गुणस्तर बोल्न छैन RUDN।
इन्टरनेटमा नकारात्मक समीक्षा एकदम ठूलो प्रतिशत छात्रावास मा प्राप्त गर्न नसक्नुको बारेमा जानकारी छ। यस को लागि, विद्यार्थीहरू लाइन खडा र कारण सबै प्रकारका अप आउँदै बन्दोबस्त लागि जिम्मेवार ती गहन जस्तो भनेर। यो बावजुद आवश्यकता धेरै अन्य छात्रावास प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ खोज्न बाध्य छन् र यो अक्सर banal थप शुल्क छ।
समीक्षा बीच, त्यहाँ enthusiastically PFUR मा प्रशिक्षण वर्णन गर्नेहरूलाई छन्। आखिर, विश्वविद्यालय विद्यार्थी धन्यवाद धेरै देशहरूमा इंटर्नशिप अवसर थियो। 50 हजार rubles - साथै, विश्वविद्यालय सम्मान छात्रवृत्ति राम्रो दिन्छिन्।
निस्सन्देह, तपाईंले मात्र यो स्कूलमा लागू गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। तर आफ्नो लक्ष्य भविष्यको लागि शिक्षित छ भने, मलाई लाग्छ, रूसी जनताहरु 'दोस्ती विश्वविद्यालय भन्दा राम्रो विद्यार्थी, तपाईं फेला हुनेछ।
गरम फोन - कारणहरू र उपचार
अण्डाकार प्रशिक्षक टूर्नामेंट्स पवन: समीक्षा, स्थापना
पानी शोधन कारतूस कसरी छनौट गर्ने? प्रकारहरू, सञ्चालनको सिद्धान्त, मूल्यहरू